Warshadaha Shiinaha Oo Laablaabiyaya Muraayadda Muraayadda Murashadda Kinzon10 iyo iibgeeyayaasha | Kinzon
Isku laabista daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxaa lagu soo saaraa iyadoo la tixgalinayo rajooyinka kala duwan ee macaamiisheenna; sidaas awgeed isku laabma daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxay noqotaa mid ka mid ah nidaamka ugu baahida badan dhammaan noocyada wax soo saarkeena. Intaa waxaa dheer in la isku waafaqi karo in lagu daro boos cusub meesha laga hirgaliyay.
Isku laabista daahyada muraayadda daaqada-Kinzon10
Iyada oo lagu laalaabo daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10, waad kuxiran kartaa riyadaada inaad isticmaasho balakoonkaaga sanadka oo dhan. Isku laabista daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxay ka difaacdaa dabaysha, roobka iyo sanqadha. Isku laabista daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 si buuxda ayaa loo furi karaa, sidaa darteed qaybo galaas ah ayaa suurtagal ah in la jiito waqti kasta oo aad ku raaxeysan karto balakoonkaaga furan.
Astaamaha Nidaamka loogu laabto daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10
1. Fidinta daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxaa loo isticmaalaa noocyada badan ee qaabka balakoonka, waxay gaar u tahay glazing terrace.
2. Magdhowga magdhowga: Isku laabidda daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxay leedahay astaan ​​magdhow oo loogu talagalay astaanta guud ee hagaajin doonta farqiga u dhexeeya daaqadda iyo saqafka.
3. Duuliyayaasha: Isku laabida daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxay isticmaaleysay giraangiraha kubbadda weyn leh ee weyn si markaas panesyadu si tartiib ah u socdaan.
4. Cabbirka cabbirka: Ballaca ugu sarreeya ee daaqada muraayadda daaqada -Kinzon10 waa 800mm oo dhererka max waa 2500mm goob kasta oo galaas ah.
5. Xirmooyinka xargaha: Isku laabista daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxaa loo adeegsaday SS304 dhammaan geesaha xijaabka si ay u taagnaato culeys weyn.
6. Daboolka badbaadinta: Isku laabista daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxay adeegsanaysaa daboolka ilaalinta nylon-ka ee muuqaalka galaaska si looga fogaado in wax yeelo gaadho.
7. Qalabka iskuxirka: Isku laabista daahyada muraayadda daaqada -Kinzon10 waxay isticmaashay laba qaybood oo zinc ah oo ay fududahay in lagu xiro laba astaamood oo leh dariiqyo xagal ah.
Daaqad-laabis Kinzon10 ah ayaa loo adeegsaday noocyada badan ee qaabka balakoonka, oo gaar u ah glazing terrace.
Waxaa jira astaan ​​magdhow oo loogu talagalay astaanta guud ee hagaajin karta farqiga u dhexeeya daaqadda iyo saqafka.
Orodyahannada Ugu Fiican:
Adeegso giraangiraha waaweyn ee culus oo si tartiib ah uulaabo.
Muraayadaha waaweyn ee galaaska:
Ballaca ugu sareeya ee Kinzon10 waa 750mm dhererka ugu sareeya waa 2800mm loox kasta oo galaas ah.
U adeegso SS304 geesaha dhanlaha leh ee xayndaabka ah si miisaan culus u istaagi karto ugana fogaato in muraayadaha muraayadaha ah ay hoos u dhacaan.
Ku dhaji daboolka ilaalinta nylon dusha muraayadaha indhaha si aad uga fogaato in wax yeelo u dhinto
Qalabka isku xirka:
Adeegso laba qaybood oo ah zinc oo fududaanaya inaad ku xidho laba qaybood oo leh dariiqyo raad ah xagal kasta.
Ballaca ugu sareeya waa 800mm oo dhererka ugu sareeya waa 2500mm loox kasta oo galaas ah.
Hore: Balakoonka Barafka Nidaamka Kinzon08
Xiga: Albaabka Furaha Fudud ee Jaangoonka20
Albaabka Furaha Fudud ee Jaangoonka20
Albaabka Fure Frameless Kinzon20
Albaabka Furan ee Glass Kinor10